Chaizvoizvo zvinwiwa kubva kuEngland neLondon, ndezvipi? | Absolut Kufamba
Susana Maria Urbano Mateos | | London
Unoziva here zvinwiwa zveEngland? MuUnited Kingdom, hapana mubvunzo kuti ndiyo imwe yeinoshanyirwa uye inowanzo shanyirwa nevashanyi, asi kunyanya England, yekuve imwe yeinonyanya kushamisa pane yakasarudzika tsika, nharaunda uye tsika. Kunyangwe paine chokwadi chekuti London ndiro guta guru reEngland, zvinosvika pakufadza kukura kwakaita tsika netsika nemagariro avo, zvichiita kuti mapato maviri aya ave nezvikafu nezvinwiwa zvavo zvavanofarira kunyangwe iri nyika imwechete.
Zvino chaizvo isu tiri kuzotaura nezve iyo zvinwiwa zvinobva kuEngland neLondon, iyo pasina kupokana iwe unofanirwa kufunga nezvekuyedza, sezvo gastronomy yayo yakapfuma kwazvo uye mune iyi kesi zvinwiwa zvakafanana.
1 Chaizvoizvo zvinwiwa zveEngland
1.2 Hot apuro muto
1.3 Bhari yemvura
1.4 Mvura Uchi newaini
2 Chaizvoizvo zvinwiwa zveLondon
2.2 Dhizaini doro
2.4 Porto, Jerez, Konjak
Chaizvoizvo zvinwiwa zveEngland
Zvakajeka, kubvira tii itsika yakasimba kwazvo muEngland, vanoitora pakudya kwemangwanani, kudya kwemanheru, uye dzimwe nguva pakudya, Ini ndakasviba iwe kana iwe zvakajairika Ivo vanochida, ndiko kunakidzwa kwavo kuisa mukaka nezvinotapira pairi, vanowanzozvitora vega uye pasina chero chinofambidzana senge chingwa kana makuki.
Nguva zhinji vanofarira kugadzirira tii neiyo dandelion midzi, seimwe inogadzirwa nemashizha emuhudyu.
Hot apuro muto
Chinwiwa icho inowanzodhakwa munguva yechando uye inopihwa kana muchero wapfuura nematanho akati wandei ekuvira.
Kazhinji inofungidzirwa soda, i chaiyo chinwiwa cheEngland uko chinhu chayo chikuru chinenge chiri bhari, chinozofanirwa kufashaidzwa kuti isvinirwe gare gare, mvura inobva mairi ichadirwa pamusoro pemiti yemichero iyo inozotapirwa kuti inakidze.
Mvura Uchi newaini
Huchi hwemvura imvura ine huchi iyo yaita nzira yekuvira, kune rumwe rutivi, waini yakajairika mumigwagwa yeEngland, inoshandiswa kuperekedza chikafu, nezvimwe.
Chaizvoizvo zvinwiwa zveLondon
Tinofanira kuyeuka kuti kunyangwe London neEngland iri nzvimbo mbiri dzakabatana zvakanyanya, dzimwe nguva iyo tsika uye gastronomy inogona kuchinja uye dzimwe nguva kwete. Tevere isu tinokuudza iwe kuti ndezvipi zvimwe zvezvinowanzoitika zvinwiwa zveLondon.
Pano, tii inowanzo dhakwa zvakanyanya, mune inonzi "Manheru tii " ingave nhema kana yakajairwa, vanowanzo kuinwa kwemaawa ese. Nguva zhinji ivo vanowanzo famba nayo nemukaka kana zvinotapira zvakapusa, zviri kune wese kuravira uye kufunga.
Asi havangomwa tii chete, kofi iri kutora mukana Mudzimba zhinji dzeChirungu nemabhawa, iri kudyiwa zvakanyanya uye inowanzo kupihwa kwenguva refu, asi zorora uine chokwadi chekuti pese paunoda iwe unogona kuwana espresso mukapu yakajairika kana tsime. Ikofi inoperekedzwa nemukaka, kana inogona kutorwa mocha kofi, cappuccino nemukaka furo, akazvarwa Kana chero sirasi yakasanganiswa mune mamwe mabhawa nemalounges.
Dhizaini doro rakanyanya london mamirire uye zvinokurudzirwa zvikuru kuti zvinwe, kunyanya kuma pub akazvimiririra kana mabhawa, sezvo ichiedza kuchengetedza nyika yakachena uye yakapfuma pakuvira kwayo, izvo zvinoita kuti iwane kuravira kwakanyanya, asi pamusoro pezvose nekuti nzvimbo idzi ichakupa iyo London mamiriro.
Kazhinji mapendi anopihwa kana mune zvimwe zviitiko kana iwe uchida hafu mapaundi anogona kupihwa. Pasina kupokana, iko kuravira kwausingafanire kupotsa, ndoda kurega kumira.
Hechino chinhu chakasarudzika uye pane hutsika hwese hwakatsaurirwa doro, saka ndinokurudzira kuti ushanyire vamwe yakazvimirira pub, iyo isiri yechero franchise, iwe ucharavira hwahwa hwakanaka, uine mhepo yeLondon chaizvo. Akakurumbira ndeaya lagerla pale alela zvinorwadzauye madoro madema la simba kana the porter. Unogona zvakare kuedza iyo ginger ale, doro rinotapira rinotapira, kune avo vanoda kuyedza zvakasiyana.
Iyo inorumbidzwa zvikuru uye inonaka, asi kazhinji haiwanikwe zvakanyanya, uye inowanzo kupihwa pakudya kwakakosha kana zviitiko zvakakosha, kunyangwe ichikurudzirwa kuyedza. Unogona kunakirwa nazvo munguva pfupi yapfuura uye novel wine waini uye mumaresitorendi anozivikanwa kwazvo muguta
Porto, Jerez, Konjak
Ivo vanowanikwa zvakanyanya kupfuura waini, uye nehurefu hwakanyanya hwedoro, dzinowanzo kuwanikwa mumabhawa kana mumabhawa madiki, kwaunogona kunakidzwa navo pamwe neyakajairika mamiriro eguta.
Zviripachena kuti idzi nzvimbo dzakanaka dzine kufanana kwadzo uye sarudzo dziri kuyedza, izvo zvinokukurudzira kuti uedze imwe neimwe yazvo, chinhu chakanakisa chatinga kurudzira ndechekuti iwe uzive chimwe nechimwe chezvinwiwa izvi wega, pamusoro pekuyedza yavo gastronomy saka hunhu, iwe nguva dzose unofanirwa kuenda kunotsvaga zviitiko zvitsva uye zvinwiwa.
Naiyo yeese zvinwiwa zveEngland unogara here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Chaizvoizvo zvinwiwa zvekumwa muLondon
Pindura kuna juji
raul haro akadaro
Ndinoda Micole Aguirre TeeaaMooHHHH Miihhh Vidaaaaaaaaaaa
Pindura kuna raul haro
NICOLE AGUIRRRE akadaro
Ini hongu k teamo raul nguva dzose pleaserrrr TEEAAAAMOHHHH XAMAKITOHHH LINDOOOOHHHH X100PREHHH PAPASITOOOO (LLLLLLLL **************
Pindura kuna NICOLE AGUIRRRE
Damn peji, ndosaka basa rakamiswaooo 🙁
Ndinokudai vaviri (L)
Pindura kuna sara
yaya sara ini tbn tk hehej = P
Ini ndinobva kuUruguay uye ini hapana chandinoziva nezve lonmdres, ini ndinongoidzidzira kuchikoro
Pindura kuna nataly
iyo ngano chabal yemakore makumi masere akadaro
peji rakanaka kwazvo kunyangwe iri sarcarsticooooooo ndiri kastorrrrrrr
Pindura kune wengano chabal ye80's domaika-
kuvonga nokuda kwezvose
Pindura kuna hanyelo
Misiyano pakati pevasikana veChinese neJapan